HR Manager | Ayeyar Hinthar Holdings Company Limited
အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ အားလုံးသော ဝန်ထမ်းများအား ခန့်အပ်ရွေးချယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ တူညီသော အခွင့်အလမ်း ရရှိရေး၊ မူဝါဒစနစ်များ လိုက်နာရေး တို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ မန်နေဂျာများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ် ပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်။
 သက်ဆိုင်ရာဌာန/ လုပ်ငန်းများအလိုက် ဝန်ထမ်းအင်အားဖြည့်တင်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
 သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်း အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများအား ခန့်အပ်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေး ရမည်။
 ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းတွင် မပါဝင်သော ဝန်ထမ်းခန့်အပ်စရိတ်များအား ခွင့်ပြုချက်မရယူမီ သုံးသပ်ခြင်းနှင့် စိစစ်ခြင်း များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
 လုပ်ငန်းတာဝန်၊ ဝတ္တရားများ၊ လုပ်ငန်းခန့်ထားရန်အတွက် လိုအပ်သော သတ်မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးရမည်။
 ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သော ကြော်ငြာထုတ်ပြန်ခြင်း၊ လျှောက်လွှာများစိစစ်ခြင်း၊ အင်တာဗျူးစီစဉ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ EC ချုပ်ဆိုခြင်း၊ အစမ်းခန့်ကာလ ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲရမည်။
 ဝန်ထမ်းပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ရာထူးတိုးခြင်း၊ နှုတ်ထွက်ခြင်း၊ နှုတ်ထွက်ဝန်ထမ်းများနှင့် Exit Interview ဆောင်ရွက်၍ ကုမ္ပဏီအတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ထုတ် ခြင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို စိစစ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ များဆောင်ရွက်ရမည်။
 များ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 HR လုပ်ငန်းစဉ်များ ISO Standard နှင့် ကိုက်ညီခြင်းရှိ/ မရှိ စိစစ်ခြင်း၊ သုံးသပ်ခြင်း၊ ညွှန်ကြားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 HR နှင့် ပတ်သက်သော အထွေထွေ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရေးဆွဲခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ ရုံးတက်/ ရုံးဆင်းမှတ်တမ်းများ၊ ခွင့်ရက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ထားနိုင်ရေးအတွက် ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲခြင်းနှင့် နှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံများနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 လစဉ်ဝန်ထမ်းလစာစာရင်းရေးဆွဲခြင်း၊ SSB, Income Tax ပေးဆောင်ခြင်းကိစ္စများကို စိစစ်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ဝန်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးအစီအစဉ်များချမှတ်ခြင်း၊ ခွင့်ခံစားမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ အာမခံ၊ ပင်စင်၊ ထောက်ပံ့မှုများ စသည့် ခံစားခွင့်များကို စီမံခန့်ခွဲပေးရမည်။
 ဝန်ထမ်းများ၏ မကျေနပ်မှုများ၊ အဆင်မပြေမှုများကို ကြားနာပေးခြင်း၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက် ရမည်။
 ကုမ္ပဏီကိုယ်စား ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စများကို ကြားနာခြင်းနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက် ပေးရမည်။
 ဝန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာများအတွက် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ဝန်ထမ်းများအတွက် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲဆိုင်ရာများ၊ အခမ်းအနားများ၊ ခရီးများစီစဉ်ပေးခြင်းများကို ဦးဆောင်ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များအား အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် လျော်ညီစွာ ကျင့်သုံးလိုက်နာစေခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ဝန်ထမ်းများ၏ လျှောက်လွှာများ၊ မှတ်တမ်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ဆောင်ရွက် ရမည်။
 ဝန်ထမ်းသစ်များအတွက် “Orientation & Induction Program” အား ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သော သင်တန်းများကို ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ သင်တန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း၊ သင်တန်းများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖော်ပေးခြင်း၊ ဦးဆောင်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းများကို ပြုလုပ်ရမည်။
 သင်တန်းမှတ်တမ်းများအား စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
 ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင်ရည် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
 စွမ်းဆောင်ရည်များအား သုံးသပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များ အလိုက် ပွင့်လင်းစွာ အကြံပြုပေးခြင်း၊ လိုအပ်ချက်များအား ပိုမိုတိုးတက်စေရန် လမ်းညွှန်မှုပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက် ရမည်။
 စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်းများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဆောင်ရွက်ရမည်။
 သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ Organization Structure ရေးဆွဲပေးခြင်း၊ Workforce Planning ရေးဆွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ဌာနအလိုက်ရေးဆွဲတင်ပြသော Job Description (JD) များအား ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းအလိုက် ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကွဲလွဲနေပါက ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ဌာနအလိုက်ဆောင်ရွက်နေသော Standard Operating Procedures (SOP) များ လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကွဲလွဲနေပါက ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရမည်။
 ကုမ္ပဏီမှ ပေးအပ်သော Human Resources ဆိုင်ရာ အထူးတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
 အခါအားလျော်စွာ Board of Directors အဖွဲ့ဝင်များမှ ပေးအပ်သည့် တာဝန်များအားဆောင်ရွက်ရမည်။
 B.B.A/ B.P.A/ B.A (Psychology)/ B.Dev, M.B.A, M.Dev သို့ ဘွဲ့ရပြီး HR Diploma ရပြီးသူဖြစ်ရမည်
 HR Operation ပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်နှင့် HR Supervisory ပိုင်းတွင် အနည်းဆုံး(၃) နှစ်ရှိရမည်။
 Computer Microsoft Office suite (Windows, MS Word, Excel, and PowerPoint) ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတက်ရမည်။ HR Software ပိုင်းများအသုံးပြုတက်ရမည်။
 မြန်မာ အင်္ဂလိပ် (၂)ဘာသာဖြင့် ရေးသား၊ဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်ရမည်။
 အလုပ်သမား ဥပဒေနှင့် HR၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ကောင်းမွန်သိရှိနားလည်ရမည်။
 နားထောင်မှုစွမ်းရည်၊ တင်ပြမှုစွမ်းရည်၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည်၊ ဦးစီးဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဆက်သွယ်မှုစွမ်းရည် ကောင်းမွန်ရမည်။
 လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲသူများ၏ မျှော်လင့်မှုချက်အား ကောင်းမွန်စွာသိရှိနားလည်ရမည်။
 ဝန်ထမ်းများ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများအား အကြံပြုခြင်းနှင့် ရူထောင့်ပေါင်းစုံမှသုံးသပ်ခြင်း များအား ယုံကြည်မှု ရှိစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
 HR ဗျူဟာဆိုင်ရာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းဆီ၏သင့်လျှော်သည့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် မြင့်မားသည့်စွမ်း ဆောင်ရည်ဖြင့် ဝန်ထမ်းများအား စိတ်ကျေနပ်မှု ပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
 အရေးကြီးသည့်သတင်းအချက်အလက်များအား ဆောင်ရွက်ရာတွင် အချိန်နှင့် အမျှလုံခြုံစွာလျို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရမည်။
 ကုမ္ပဏီရှိအဆင့်ဆင့်ရှိသည့် ဝန်ထမ်းများအားလုံးနှင့် ကောင်မွန်သည့် ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောင်နိုင်၍ ထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။
- Provided ferry and uniform
- Annual Bonus and Salary increment by year
Sat, Sunday and Public Holiday - Off
Ayeyar Hinthar Holdings Also Take Pride in its capacity and capability to export Myanmar White Rice. Since 2006, Ayeyar Hinthar Holdings has consistently exported an average of about 180,000 MT Myanmar White Rice every year. Ayeyar Hinthar Holdings is positioning its as the Global Supplier of Food Demands and has pledged to continuously supply the global demand of White Rice efficiently and at reasonable pricing.
Aung Myin Thu Wholesale
HR Planning - Team Manager